Haayada World Health Organization Ayaa Ku Dhawaaqday In Xanuunka Dilaaga Ah Ee Corona Virus Yahay Masiibo Caalami Ah? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Hay’da qaramada midoobay caawimaadka u qaabilsan ee World Health Organization ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in cudurka Corona Virus ay si rasmi ah ugu aqoonsadeen musiibo caalami ah.
Ha’yda WHO ayaa go’aankan soo saartay xili uu cudurka dalka China ka soo bilawday ee Corona Virus uu si waali ah ugu sii faafayo dacalada aduunka laakiin xidhiidhka kubbada cagta England ee FA-ga ayaa qaatay go’aan qariib ah.
FA-ga Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in kulamada saaxiibtinimo ee xulka qarankoodu la ciyaarayo Italy iyo Denmark ee dhamaadka bishan March uu sidii loogu talo galay u qabsoomi doono iyada oo waliba taageerayaasha loo furi doono Wembley Stadium.
Xulka qaranka England ee la ciyaari doono dhigooda Italy ayaa ah kan ugu halista badan iyada oo la diwaan galiyay in dalka Talyaaniga ay ku dhinteen 196 qof intii lagu jiray 24 kii saacadood ee la soo dhaafay kuwaas oo uu asiibay cudurka Coronavirus.
Guud ahaan dalka Talyaaniga waxaa cudurka Coronavirus u geeriyooday 827 qof oo dhamaantood uu cudurkani ku dhacay 19 kii maalmood ee ugu danbeeyay.
Waxa kale oo la xaqiijiyay in 1028 qof oo kale ay xaalad halis ah ku jiraan iyada oo cisbitaalada Talyaaniga ay cudurka Coronavirus u jiifaan 5,838 kun oo qof waxaana ilaa hadda Italy laga diwaan galiyay in ka badan 10,000 kun oo kiis oo xanuunkan ah.
Laakiin iyada oo xaaladan jaho wareerka ahi jirto isla markaana ay hay’da caafimadka aduunka Who ku dhawaaqday in Coronavirus loo aqoonsaday musiibo caalami ah, waxa uu FA-ga Ingiriisku soo saaray war saxaafadeed ay ku xaqiijiyeen in kulamadii saaxiibtinimo ee Italy iyo Denmark ay socon doonaan.
Xulka qaranka Italy ayay markii hore la qorsheeyay in March 27 ay magaalada London ku booqan doonaan England kulankaas oo ka dhici doona Wembley Stadium, laakiin waxaa la filayay in kulankan la baajiyo halista Coronavirus awgii balse FA-ga ayaan wali go’aankoodii badalin.
War saxaafadeedka ka soo baxay FA-ga ayaa lagu yidhi: “Marka la eego talooyinka dawlada ee waqti xaadirkan, waxba iskamay badalin xaaladii kulankeena ka dhanka ah Italy iyo Denmark ee dhamaadka bishan”.
Laakiin qoraalka FA-ga ayaa lagu sheegay in haddii ay xaaladu xumaato ama war kale yimaado taageerayaasha lagu soo wargalin doono: “Waxaanu hubin doonaa in aanu taageerayaasha ku soo wargalino wixii cusub ee halkaas ka jira”.
Waxay hadda u muuqataa in FA-ga England uu qaatay halista ah in taageerayaasha xulalka Denmark, Italy iyo England ay ka soo xaadiri doonaan kulamada saaxiibtinimo ee dhamaadka bishan.
Caabuqa Coronavirus ayaa saamaynta ugu xun ku yeelanaya kulamada horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo ay haddaba socdaan qorshaal cusub oo ciyaaraha muddo dib loogu dhigayo.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in kulamada baaqiga ka ah horyaalka Premier league uu saamayn ku yeelan karo cudurka Coronavirus haddii ayna xaaladu ka soo rayn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa isku soo beegmay war saxaafadeedka FA-gu ku adkaysteen kulamada saaxiibtinimo in taageerayaal soo xaadiraan iyo in hay’ada caafimaadka aduunka WHO ay cudurka Coronavirus u aqoonsatay musiibo caalami ah.